သရက်သီးအရောင်း - ဤရာသီတွင် သင်လိုအပ်သော အခြေခံအ၀တ်အထည်များ | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 10:00 | ငါဘာဝတ်တာလဲ
အ သရက်သီးရောင်းအား သူတို့က သင့်တံခါးကို လာခေါက်ပြီး အခုဆို တကယ်ကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ လျှော့စျေးတွေကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတိုင်းကို ခံစားဖို့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ်အခြေခံဖြစ်သောကြောင့် သင်နေ့စဉ်လိုအပ်နေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင်၊ သင်သည် လပေါင်းများစွာ သယ်ဆောင်နိုင်သော သတင်းအချို့ကို ရရှိရန် အရောင်းသည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိထားပြီးဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်အစား အောက်ပါရွေးချယ်မှုတွင်လည်း သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဘာလဲ သိချင်ပါသလား။ ဤရာသီတွင် အကောင်းဆုံးစတိုင်လ်ကို ခံစားရန် ၎င်းတို့တစ်ဦးစီကို မှတ်သားထားပါ။
1 သရက်သီးအင်္ကျီ နှင့် ကာဒီဂါများ ရောင်းသည်
3 ဂါဝန်များ သို့မဟုတ် စကတ်များ ?
4 မိုးပြာရောင် ဘောင်းဘီနှင့် ထောင်ဂရီ
သရက်သီးအင်္ကျီ နှင့် ကာဒီဂါများ ရောင်းသည်
သရက်သီးများ ဖြင့် တင်ဆောင် ရောက်ရှိလာသည် အင်္ကျီများနှင့် cardigan နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးကောင်းများရှိသည်။. ထို့ကြောင့် ပထမကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေဘူယျ စည်းမျဉ်းအတိုင်း ဖြည်ဖြည်သောအဝတ်အစားများကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နေ့ရက်တိုင်းအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့် ထိတွေ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ဖက်မှာ၊ ကြီးမားတဲ့အခြေခံအချက်လေးတွေက ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ အမြဲရှိနေမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေအပြင် rhinestones၊ embroidery သို့မဟုတ် cut-out necklines လိုမျိုးအသေးစိတ်အချက်လေးတွေက ချီတက်ပွဲကိုလည်း လက်လွတ်မခံချင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် သင်ထင်ထားသည်ထက် စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သေချာပါတယ်၊ သင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သင်အမြဲတမ်းရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီးပိုပြီးခိုင်မာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ကျယ်ပြန့်သော အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် ပေါ်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တီရှပ်များ သို့မဟုတ် ဖဲပြားအင်္ကျီများနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ။ သူတို့အောက်မှာ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အဝတ်အစားကို ပို၍ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိစေမည့် ခလုတ်ကြီးများဖြင့် ပျော့ပျောင်းပြီး ရိုးရှင်းသောအဝတ်များကို ရွေးချယ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကြားနေ သို့မဟုတ် အခြေခံအရောင်များသည် ထာဝရ ဇာတ်ဆောင်များ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ် ဒီရာသီအတွက်ပါ။ အခြေခံအကျဆုံးအဝတ်တစ်ခုသည် အင်္ကျီများပေါ်တွင် ကျရောက်သည်။. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ငါတို့ကို ပိုတောင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး အအေးဒဏ်နဲ့ အမြဲဝေးကွာနေစေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်မှာက Mango အရောင်းအ၀ယ်မှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ စိတ်ကူးကို ကယ်တင်ပြီး အဲဒါက နောက်ပြန်လှည့်လို့ရတဲ့ အထည်တစ်မျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ခုအတွက် နှစ်ခုရှိပြီး အဲဒါကို နှစ်သက်ပါတယ်- တစ်ဖက်မှာ သားရေအာနိသင်ရှိပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ဆံပင်က ကျွန်တော်တို့ကို နွေးထွေးစေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အင်္ကျီ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါပါပဲ။ သူတို့ဟာ သိုးမွှေးလို ပုံစံအပြင်မထွက်ပါဘူး။ ရင်သားနှစ်ထပ် ရင်သားက ကံကောင်းတယ်။ ကုမ္ပဏီက သူတို့ကို သတိထားမိပုံရသည်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒါတွေက အခြေခံဖြစ်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ အပြီးသတ်ပုံစံတွေနဲ့ ဖန်တီးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကနေ အထည်ဘောင်းဘီနဲ့ တရားဝင်တစ်ပိုင်းပါ။ သင့်အပေါ်မူတည်ပါတယ်!
ဂါဝန်များ သို့မဟုတ် စကတ်များ ?
သင်ရွေးချယ်ရန်အတန်ငယ်ခက်ခဲပါက၊ နှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တည်းမို့ပါ။ midi နှင့် ribbed dresses များသည် အမြဲတမ်း အခြေခံကောင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. အကျီ င်္၊ ခါးပတ်ကျယ်တဲ့ ခါးပတ် ဒါမှမဟုတ် ထင်ရှားကျော်ကြားမှု အားလုံးကို ပေးစွမ်းနိုင်လောက်အောင် အများကြီးပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အခြေခံအရောင်များဖြင့် ပုံနှိပ်ထားသော ဒူးအရှည်စကတ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝများတွင် ဖက်ရှင်ပေါင်းစပ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုးပြာရောင် ဘောင်းဘီနှင့် ထောင်ဂရီ
အရောင်းအ ၀ ယ်များကြားတွင် cowboy ပုံစံသည် ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပေ။ Mango တွင် သို့သော် ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား ဘီဘီနှင့် မီးမောင်းထိုးပြလိုပါသည်။ အမြဲတမ်း နှစ်သိမ့်မှုပေးသော အဝတ်အစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် ရှိနေရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ အခုတော့ ဘောင်းဘီအဖြောင့်နဲ့ အထည်တွေက မဝေးတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာ ဝတ်လို့ရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့က အရောင်းမှာ အသင့်စောင့်နေတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » ငါဘာဝတ်တာလဲ » Mango အရောင်းတွင် သင်တွေ့ရမည့် အခြေခံအဝတ်များ